Global Voices teny Malagasy » Ahoana no ahafantarantsika amin’ny tantara an-tsarin’i Marcelo D’Salete ny lasa sy ny ankehitrinin’i Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Desambra 2018 9:12 GMT 1	 · Mpanoratra Luis Henrique Nandika (en) i Liam Anderson, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanabeazana, Foko sy Fiaviana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Tamin'ny taona 2013, namoaka andian-dahatsoratra momba ny tantara an-tsarin'i Marcelo D’Salete ny Global Voices. Tamin'izany fotoana izany izy nanomboka nahazo fankatoavana noho ny fitantara sy ny fomba fijeriny ny fiainana an-tanandehibe voamariky ny “[fanoherana-fanontaniana sy fanasarotana bebe kokoa ny fahafahana misolo tena ny vahoaka mainty hoditra sy ny tantarany,” araka ny filazany .
Tao anatin'izay fotoana lavalava izay D’Salete nitodika tany amin'ny lasan'i Brezila. Ireo sangan'asany farany, Cumbe  (2014) sy Angola Janga  (2017), dia milaza ny tantara fifaharan'ny andevo mainty hoditra ao amin'ny firenena iray mpanafatra be indrindra ireo Afrikana andevo ao amin'ny tontolo tandrefana (mihoatra ny im-10 avo heny noho ny an'i Etazonia ), sy ny farany izay nandrara izany (tamin'ny taona 1889).
Mifototra amin'ny fikarohana ara-tantara, ny sangan'asan'i D'Salete dia mitondra antsika any amin'ny lalan'ny fihaikana, fiarahamiasa sy herimpo izay nahazoany loka  amin'ny maha-artista azy tao Brezila sy tany ivelany.
GV: Tamin'ny jolay 2018, rehefa nanoratra momba ny loka Eisner tamin'ny Cumbe  ianao dia nilaza hoe “Ny fandrisiham-bahoaka amin'ny fizàrana sy famokarana ny matihanina dia manana anjara amin'ny fizotran'ny famoronana tantara an-tsary sy fisandratan'ny mpanoratra sy fomba fitantarana hafa.” Naninona ianao no nanasongadina ny anjara toeran'ny fandrisiham-bahoaka?
MDS: Ny boky “Cumbe” sy “Angola Janga” dia nahazo fanohanana avy amin'ny PROAC  (sampan'ny governemanta mampiroborobo ny kolontsaina ao amin'ny fanjakan'i São Paulo), izay programa manome loka ireo tetikasa tsara indrindra amin'ny alalan'ny bolongam-bola ho an'ny artista sy ny fanontana boky. Nanampy ahy betsaka izany hananako fitonian-tsaina hamitako ireo sombin-tantara ireo. Miharihary fa asa efa nitranga ireo, ary nataoko an-tsaina fa hahatratra ny vahoaka ireo na ho ela na ho haingana. Saingy ny loka no nanampy ny asa ho tafavoaka tamin'izany fotoana izany sady vita tsara. Zava-dehibe izany handrisihana mba hitohizan'izany any amin'ny fanjakana hafa sy any amin'ny dingana federaly, mba ahafahan'ny artista any amin'ny toerana samihafa mamokatra ny asany sy mahita izany vita pirinty, mahita izany miely.
MDS: Tiako ny manasongadina fa ity sangan'asa, Angola Janga, ity dia sombin-dahatsoratra miresaka vanim-potoana sy toe-draharaha iray. Tiako tokoa ny mahita azy ity ho asa ahitana karazan'olona maro, fomba fitantara samihafa, miezaka mamakafaka ny toe-raharaha amin'ny fomba fifamatorana sarotra indrindra. Nahitan-javatra maro tokoa izany, fomba nianarana zavatra maro nandritra izay fotoana maro izay. Ny hevitra tamin'izany dia ny mba hahatonga ny olona ho akaiky kokoa ireo karazana mpiantsehatra ireo, ao amin'io fomba fitantara io, ankoatra ireo mpitarika manana anjara toerana lehibe, tahaka an'i Zumbi [iray amin'ny mpitarika an'i Palmares’ Quilombo ], fa mampiseho ihany koa mpiantsehatra hafa izay manana ny anjara toerany ihany koa mba hahatakarana bebe kokoa izany vanim-potoana izany.
Raha te-hahita bebe kokoa momba ny sangan'asan'Atoa Marcelo D'Salete, dia jereo ny tranonkalany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/29/132396/
 im-10 avo heny noho ny an'i Etazonia: http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates